အနည်းဆုံးသင်ခန်းမများ၌သီးခြားနေခြင်းမရှိသောကြောင့်အိမ်တွင်ရှိနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးညည်းတွားသံကိုရပ်တန့်ပါ - သတင်း
နယ်စပ်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယကိုကျွန်မအိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ဆွီဒင်မှာငါရှိနေတဲ့မိသားစုဟာစွန့်စားမှုကြီးကြီးမားမားတွေပါ။ ငါနေဖို့ဒီမှာတူသောဒီတော့ Cardiff, ကကြည့်ရှုသည်။ ကာဒစ်ဖ်သည်ငါခန်းမများ၌တစ်ယောက်တည်းရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စံပြနေရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းသည်မိသားစုသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသောအခြားသူများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အချိန်ဖြုန်းဖို့အိမ်သို့သွားနေစဉ်ဒီတော့ငါငါ့ Taly နေရာထိုင်ခင်း၌ငါ့ lockdown လာပြီခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာသွားပုံကိုပါပဲ ...
သဘာဝကျကျ, အခုငါ Bang တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဆံပင်ညှပ်စရာမလိုဘဲပိတ်ထားလို့ရတဲ့တစ်ကိုယ်ရေအချိန်ကမပြီးသေးဘူး။ Youtube ကငါ့ကိုအများကြီးသင်ပေးနေတယ်၊ ​​ငါဒီအချိန်မှာငါ့ရဲ့ဆံပင်ညှပ်တဲ့စွမ်းရည်ကိုလိုက်ဖို့ uni ထဲကနေထွက်ဖို့တောင်စဉ်းစားနေတယ်။
ဒါကငါပြoverနာနှင့်မေးခွန်းများဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြားချပ်ချပ်ထားခြင်းသည်မီးဖိုချောင်တွင်လွတ်လပ်သောအုပ်ချုပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ငါနေရောင်ခြည်အလင်းရောင်ပြတင်းပေါက်နားမှာအနည်းငယ်သာဖန်တီးပြီးဆိုဖာသည်ကျွန်ုပ်၏ Netflix အစက်အပြောက်ဖြစ်လာသည်။ ငါအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာအချို့မျိုးသို့လှည့်ပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာအပင်တွေရှိတယ်။ အနည်းဆုံးငါ့အချည်းနှီးသောစပျစ်ရည်ပုလင်းအသုံးဝင်သောလာမယ့်ကြသည်! လိုပဲငါပိုပြီးစပျစ်ရည်ကိုသောက်ရန်ဆင်ခြေလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ငါဒီစိတ်ကြွဆေးကာလအတွင်းငါ့အဖတ်စာအုပ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည်
ငါ Ratatouille ကနေအခြေခံအားဖြင့် Remy မိပါတယ်
တက္ကသိုလ်မတိုင်ခင်ကငါချက်ပြုတ်တာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး။ ငါ့မိသားစုကစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါဘယ်တော့မှမလိုအပ်ခဲ့ဘူး၊ ငါခရီးထွက်တုန်းကငါ့ရည်းစားကငါတို့အတွက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်ညတွင်ဆူရှီကိုကျွန်ုပ်အောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့ငါလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးကိုငါများများစားစားချစ်ပြီးကိုယ့် fave မုန့်အသစ်တစ်ပါတ်ကိုတစ်ပတ်လောက်အစာစားခြင်းပါဘဲ။ ယခုတွင်မူကျွန်ုပ်အတွက်ကြက်ကြော်ကိုထာဝရဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ကဖြစ်လာဖို့ပါ TikTok ကျော်ကြားသည်
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ '' For For '' စာမျက်နှာတွင်တစ်ကြိမ်ထက်မကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီပိတ်ဆို့ခြင်းပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တရားဝင်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပေးမည် TikTok တွင်နာရီပေါင်းများစွာအချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ညဝတ်အင်္ကျီလေးများမချွတ်ပါ၊ အချို့သောမိတ်ကပ်များကိုပါးရိုက်။ ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းသက်သာလာသည်။ TikTok သည်ကျွန်ုပ်၏အထီးကျန်ကုထုံးဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမည်သူသိသနည်း။
ငါသာ Charlli d'Amelio ထက်ပိုပြီးကျော်ကြားဖြစ်ခြင်းမှသာ 54.2m နောက်လိုက်ပေါ့
ကျောင်းသားများမပါဘဲပင် Taly သည်ကျယ်လောင်သောလမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်
လတ်ဆတ်သောထွက်ခွာသွားသောလတ်ဆတ်သောအချိန်ဖြစ်ပေါ်သင့်တယ်, ဟုတ်သလော မှား ကနေစဉ် မျှတစွာ လူတွေဟာစူပါကျယ်လောင်လွန်းလို့ငါနိုးတဲ့ညတွေရှိတယ်၊ အဲဒါကငါအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုံစံကိုဖျောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါပဲ။ ဂန္ထဝင်။ ငါဟာလုံးဝအထီးကျန်မဟုတ်ကြောင်းသိရတာဝမ်းသာစရာပါပဲ။
မင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမင်းအလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေထိုင်ခြင်းကကောင်းပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တည်းနေခြင်းသည်လုံးဝကွဲပြားသောဘောလုံးပွဲဖြစ်သည်။ ပထမနှစ်ကခက်ခဲလား၊ ပြီးတော့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုထွက်ခွာခိုင်းလား။ ဒါဟာတကယ်အထီးကျန်ရရှိသွားတဲ့။ ငါကညဥ့်နက်နက် ၆ နာရီလောက်ငါ့ညီမလေးနဲ့စကားပြောခဲ့ပြီးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ video chat လုပ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအများနှင့်သာစကားပြောနိုင်ခြင်း၊
ငါ lockdown စူပါအလေးအနက်ထားခဲ့ပေမယ့်ငါကပြန့်ပွားဖို့ပိုကြောက်တယ်ပထမ ဦး ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးခံရဖို့ကြောက်လန့်မဟုတ်ခဲ့ပေ လူတွေရဲ့ပုံပြင်တွေကိုဖတ်ပြီးငါ့သူငယ်ချင်းတချို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကြားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏အမြင်သည်ယခုလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ရတော့မယ် - အအေးမိတဲ့အခါငါလုပ်ဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အရာ။ ငါဒီတယ်လျှင်ငါကဲ့သို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်အဘယျသို့စိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။
ဒီ lockdown လုပ်တာကိုတစ်ကိုယ်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိခင်ကျွန်တော့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဟာအရမ်းရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ငါည ၇ နာရီလောက်မှာအိပ်ရာထတယ်၊ မနက် ၁၁ နာရီမှာအိပ်ပျော်သွားတယ်၊ ငါဗိုက်ဆာတဲ့အခါတိုင်းစားမယ်။ ငါမွန်းတည့်မီနိုးလာပြီးနေမထွက်ခင်အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာကျွန်မရဲ့စိတ်ရောဂါကတစ်တန်တိုးတက်လာသည်။ ပုံမှန်စားခြင်းနှင့်ကျန်းကျန်းမာမာစားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ချက်ပြုတ်ခြင်းကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ မနက်စာအတွက်ချိုငရုတ်သီးစားသုံးမှုတစ်စုံကိုစားခြင်းထက်များစွာကောင်းပါသည်။ သင့်ကိုယ်သင်အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ခြင်းသည်ဤမျှကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ ငါသိသာထင်ရှားတဲ့ပြတ်သားကိုက်စားဆဲပေမယ့်သူတို့ကတင်းကြပ်စွာယခု Netflix ကသရေစာပါပဲ။
တစ်ခုခုသိလား အကြံဥာဏ်များပို့ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဤကဲ့သို့သောပုံပြင်များကိုချိုးဖျက်လိုပါသလား? အဖွဲ့သို့ဆက်သွယ်ပါ၊ အတွေ့အကြုံမရှိပါ။ မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကို DM @thetabcardiff အပေါ် Instagram ကိုသို့မဟုတ်အဆိုပါ Tab Cardiff ပေါ်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်။
•ကျွန်ုပ်တို့သည်လတ်ဆတ်သောခန်းမများအကြောင်း Freshers ကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးသူတို့စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်မဟုတ်
ဘာကြောင့် sororities pa မှာအိမ်တွေမရရှိနိုင်တာလဲ
• SU နှင့်ပတ်သက်သောအထင်ကရအရာ ၁၂ ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှနွေးထွေးစွာမနေခဲ့ပါ
• Cardiff ကျောင်းသားတစ် ဦး ချင်းစီကိုသီးခြားခွဲထားသည့်အဆင့်ခုနစ်ဆင့်သည်ယခုအချိန်တွင်ဖြတ်သန်းသွားရမည်